Hawwii uummata Oromoo!Filannoodhaan isa nuuf hin taane ofirraa dhiibna.”Jaamboo Jootee! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHawwii uummata Oromoo!Filannoodhaan isa nuuf hin taane ofirraa dhiibna.”Jaamboo Jootee!
Hawwii uummata Oromoo! “Kan nu rifachiisu baayyachuu paartilee siyaasaa Oromoo miti. Paartiin yoo baayyatee dhufe sagalee keenyaan filannoodhaan isa nuuf hin taane ofirraa dhiibna.” Jedhe Wellisaa Jaamboo Jootee!